Mbappe oo magacaabay ciyaaryahanka ku guuleysan kara abaal marinta Ballon d’Or 2019 – Gool FM
(Yurub) 20 Maajo 2019. Weeraryahanka da’adda yar ee kooxda Paris Saint Germain Kylain Mbappe ayaa u sharaxay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or 2019.
Waxaa hoos u dhacay rajada laga qabi karo in laacibka reer Argantina uu ugu guuleysan karo abaal marinta Ballon d’Or 2019, kaddib markii ay kooxda Barcelona ku hartay wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa guuldaro niyadjab ah kala kulantay dhigeeda Liverpool kulankii lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ee ka dhacay garoonka Anfield, kaddib markii loogu awood sheegtay 4-0.
Si kastaba ha ahaatee, 20 jirka reer France ayaa u arka in wali Lionel Messi uu u sharaxan yahay ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or markiisii 6-aad xirfadiisa kubadda cagta.
“Ciyaaryahanka ku guuleysan kara abaal marinta Ballon d’Or 2019 ayaa ah Lionel Messi”.
“Inuu ka haro tartanka Champions League wax isbeddel ah ma lahan, waa kan koowaad ee wax walba”.
“Sanadkan wuxuu soo bandhigay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican, inkastoo sanadka uu sii socon doono ilaa December, wax cabsi ah kama qabo isaga, wuxuu ciyaari doonaa ilaa December”.